Xasan Sheekh oo si kulul uga hadlay dib u dhiga dacwada Badda, eedna u jeediyay Villa Somaliya. | XAL DOON
Home NEWS Xasan Sheekh oo si kulul uga hadlay dib u dhiga dacwada Badda,...
Xasan Sheekh oo si kulul uga hadlay dib u dhiga dacwada Badda, eedna u jeediyay Villa Somaliya.
Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa si kulul uga hadlay go’aanka ay maxkamada ICJ dib ugu dhigtay dacwada badda Soomaaliya ee Kenya muranka galisay.
Shir jaraa’id oo uu goordhow ku qabtay magaalada Muqdisho ayuu ku sheegay in dowladda Soomaaliya ay ogolaatay go’aanka dib u dhigista, wuxuuna shaki galiyay sababta keentay inuu arrimahan weyn kaga hadlo oo kaliya ra’iisul wasaare kuxigeenka dalka.
“Ra’iisul Wasaare kuxigeenka ka hadlaya ayaa maqlayaa, dacwada Ra’iisul Wasaare kuxigeen ma lahan, Wasiir ma lahan, Madaxweyne ayaa leh, warqad Madaxweyne ayaa lagu geeyay dacwada, dadka wakiilka ka ah Warqad Madaxweyne ayaa lagu magacaabay, waxaa rajeynayaa oo niyad samida ku jirta waxay aheyd Madaxweynaha inuu dadka hor-yimaado oo dadka u sheego waxa jira”ayuu yiri Xasan Sheekh.
Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa sheegay in dacwada badda ay wali taalo halkii uu uga tagay afar sano kahor, wuxuuna madaxda sare u sheegay in kiiskan aanu eheyn mid iyaga kaliya ay go’aan ka gaari karaan, balse ay tahay mid u wada taala dhamaan shacabka Soomaaliyeed.
Si kastaba, ICJ ayaa dhawaan ogolaatay dalab ka yimid Kenya oo ahaa in 11 bilood mar kale dacwadda badda dib loogu dhigo, waxaana xiliga la guda galayo ay ku soo aadeysaa xili dalka doorasho uu ku jiro.